Kaydka Abaal-marinta Sare ee Khatarta Hooseeya 10 | Maalgashiga Hantida
Bogga ugu weyn Kaydka Abaal-marinta Sare ee Khatarta Hooseeya 10 | Maalgashiga Hantida
Waxaa gabi ahaanba xaq ah in la raadsado maalgashi badbaado leh waqtigan aan la hubin ee masiibada awgeed- maadaama uusan qofna jeclayn inuu lacag lumiyo.
Nasiib wanaag, waxaa jira khataro badan oo hooseeya, ikhtiyaarrada saamiyada abaalmarinta sare si loo tixgeliyo, kuwaas oo qaarkood aan ku iftiimiyay qoraalkan. Continue reading si aad wax badan u ogaato
Khatartu aad bay muhiim ugu tahay maalgelinta; ma jiro wada hadal ku saabsan soo noqoshada oo quseeya iyada oo aan la soo hadal qaadin halista ku lug leh. Dhibaatadu waxay tahay in la ogaado halka ay dhab ahaantii qatarta ku jirto iyo waxa ay ku kala duwan yihiin inta u dhaxaysa khatarta hoose iyo khatarta sare. Ogaanshaha tani waxay ka caawisaa maalgashadayaasha inay aqoonsadaan fursadaha si ay u raadiyaan soo laabasho weyn.
In kasta oo ay run tahay xaddiga soo noqoshada aad heli karto waxay kuxirantahay inta ay le'eg tahay halista (iyo khasaaraha) aad diyaar u tahay inaad aqbasho, maalgashadayaasha waaweyn ayaa noloshooda ku sameeya dheelitirka labadan.
Maaddaama aanan go'aansan karin xaddiga halista ah ee aad diyaar u tahay inaad noqoto maalgaliye, waxaan isku dhajiyay qoraalkan si aan u muujiyo qaar ka mid ah halista hoose, saamiyada abaal -marinta sare ee diyaar u ah lacagtaada.
Maskaxda ku hay, si kastaba ha ahaatee, in kasta oo kuwani ay yihiin maalgashiyo halis yar, haddana aysan ahayn maalgashiyo aan halis lahayn
Maxay Yihiin Qaar Ka Mid Ah Kaydka Abaalmarinta Sare Ee Khatarta Yar?
Halkan waxaa ah 10 halis yar, kayd abaalmarino sare leh si aad u iibsato si ay kaaga caawiso inaad si ammaan ah u koraan lacagtaada.
Shirkadda Walt Disney
McCormick (NYSE: MKC) waa shirkad cunto oo kala duwan oo samaysa dhir udgoon iyo dhadhan. Shirkaddu ma aysan soo dirin soo -celin sanadle ah oo taban tan iyo 2008, taas oo macnaheedu yahay inay aragtay sicirkeeda saamiga oo kordha sannad walba 12 -kii sano ee la soo dhaafay.
In kasta oo heerka koboca EPS ee taariikhiga ah ee McCormick uu yahay 12.2%, maalgashadayaashu waa inay dhab ahaantii diiradda saaraan kobaca la saadaaliyay. Shirkadda EPS ayaa la filayaa inay korodho 7.7% sannadkan, shirkado badani sidaas ma odhan karaan. Xitaa sannadkan, iyadoo S&P 500 ay hoos u dhacday 4%iyo warshadaha alaabada cuntada oo hoos udhacay 6%, McCormick wuxuu sii wadaa inuu socdo, ilaa 6%.
25 -kii Juun, shirkaddu waxay soo saartay natiijooyin adag oo dheeraad ah rubuc -labaad ee maaliyadeedkeeda 2022, iyadoo dhajisay koror 8% ah sannadkii dakhliga soo gala iyo faa'ido 27% ah. Korodhka waxaa sabab u ahaa dadka oo guryahooda jooga oo wax badan karsanaya.
Laakiin xaqiiqdu waxay tahay in McCormick uu ka fuliyo dhammaan suuqyada, maaddaama macaashka macaashkiisu uu si joogto ah ugu jiray 40% tobankii sano ee la soo dhaafay. Waqtigan xaadirka ah, kobaca qulqulka lacagta caddaanka ah ee sanad-ka-korka ah ee McCormick waa 7.8%, taas oo ka sarreysa kuwa badan oo la tartamaya. Xaqiiqdii, sicirku wuxuu isbarbar dhigayaa celceliska warshadaha 4.4%.
Calaamadda kale ee joogteynteeda waa saami -qeybsigeeda, oo kor u kacay 33 sano oo toos ah. McCormick wuxuu leeyahay beta hooseeya 0.36, taasoo la micno ah inay aad ugu yar tahay inay ka falceliso isbadalka suuqa guud. Hadda, qiimaha saamiyada Mccorwick waxaa lagu kala iibsadaa 200.96 USD +1.57 (0.79%). Waxay ahayd tusaalaha joogtaynta iyada oo loo marayo nooc kasta oo suuq ah taas oo ka dhigaysa halis hoose, kayd abaalmarin sare leh.
#2. Dollarka Guud
Dollar General Corporation (NYSE: DG) waa tafaariiqle qiimo dhimis ah oo bixiya doorasho badeecado ah oo ay ku jiraan alaabada, alaabta guriga ee xilliyeed, iyo dharka. Waxay ahaayeen hawl-wadeenno awood leh sannadka 2022, ilaa 22% sannadkii ilaa maanta.
Iibka dukaanku wuxuu kordhay 21.7%, dakhligii saami kastana wuxuu kordhay 73% rubucii hore, maadaama tafaariiqlaha sicir-dhimista uu u furan yahay ganacsi muhiim ah inta lagu jiro amarada joogitaanka-guriga. Shirkadu waxay furtay ku dhawaad ​​1,000 dukaan oo cusub sanadkii hore.
Sida McCormick, Doolarka Guud wuxuu ka sameeyay suuqyada oo dhan, 10 sano oo toos ah oo soo noqnoqosho wanaagsan leh tan iyo markii uu soo baxay dadweynaha dabayaaqadii 2009. Laakiin joogtayntu aad bay uga sii dheer tahay taas, maadaama shirkaddu ku raaxaysatay 30 sannadood oo isku xigta kobaca iibinta isla bakhaarka-a cabbir muhiim ah oo muujinaya in tafaariiqlehu uu ku korayo fulinta iyo sidoo kale fidinta.
Doolarka Guud wuxuu leeyahay beta-shan-hoose oo hooseeya 0.53, kaas oo ka hadlaya xasilloonidiisa. Waxaa lagu kala iibsanayaa 222.39 USD +0.68 (0.31%) maanta, taas oo ku dhejineysa liiska halista hoose, kaydka abaalmarinta sare.
Kaydyo yar ayaa la isku halleynayey tobankii sano ee la soo dhaafay sida Moody's (NYSE: MCO). Shirkadda bixisa qiimeynta amaahda, cilmi baarista & dabagalka falanqaynta, dammaanadaha dakhliga go'an, aaladaha kale ee deynta & adeegyada qiimeynta halista amaahda tirada ee bangiyada, shirkadaha & maalgashadayaasha ayaa soo dhajiyay soo-celin sanadle ah oo ah 24% 10-kii sano ee la soo dhaafay oo si wanaagsan u qabtay tan sanadka aad ayuu kor ugu kacay ilaa 15% ilaa maanta.
Moody's aad buu u xoog badan yahay maxaa yeelay waa mid ka mid ah saddexda ciyaartoy ee waaweyn ee warshadeeda, oo ay weheliso S&P Global iyo Fitch Ratings. Saddexda shirkadood ayaa gacanta ku haya 95% suuqa, iyadoo Moody's iyo S&P 500 ay labada hoggaamiye ku leeyihiin qiyaastii 40% suuqa midkiiba.
Meel-biyoodkaan si fiican ayaa loo ilaaliyaa, maadaama suuqa uu taageeri doono oo kaliya dhowr hay'adood oo qiimeyn ah aadna loo nidaamiyay. Sidaa darteed, ha filanin inaad aragto Moody oo wajahaya tartan kasta waqti kasta mar dhow.
Saddexdii bilood ee hore, dakhliga Moody wuxuu booday 13%, halka dakhliga saami kasta uu kor u kacay 32% ilaa $ 2.60 saami kasta. Dakhliga Adeegga Maalgashadayaasha Moody - meheradda qiimeynta - waxay ahayd 19% rubuc, halka Falanqaynta Moody ay kor u kacday 5%.
Moody's wuxuu ka sameeyaa 60% dakhligiisa ganacsiga qiimeynta amaahda, laakiin wuxuu kobciyay dhinaciisa falanqaynta ee ganacsiga dhowrkii sano ee la soo dhaafay si loo kala duwo dakhliga marka bixinta deynta ay yar tahay.
Sannadkii la soo dhaafay ama wax la mid ah, Moody's wuxuu sameeyay dhaqdhaqaaqyo lagu kordhinayo ganacsiga falanqaynta iyada oo loo marayo iibsi. Waxay iibsatay Regulatory DataCorp, oo ah shirkad bixisa xog si ay uga caawiso shirkadaha inay u hoggaansamaan xeerarka, iyo RiskFirst, oo ah shirkad siisa falanqaynta halista maamulayaasha hantida iyo lacagaha hawlgabka.
Moody waxaa lagu ganacsadaa 290.12 USD +0.89 (0.31%) sida maanta. Kuwaas oo dhami waxay caddeeyaan inay tahay khatar hoose, oo abaalmarin sare leh.
Waxaad ka eegi kartaa tan Sida Loo Helo Lacag Suuqa Suuqa: Tilmaan Buuxo.
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A), (NYSE: BRK-B) waa ururo caalami ah oo leh uruurinta ilaa 60 kaabayaal ganacsi, oo ay ku jiraan GEICO, Duracell, iyo kuwa kale. Kuwo badan oo kuwan oo kale ah ayaa guud ahaan si fiican u sameeya iyadoon loo eegin cimilada.
Waxa kale oo ay leeyihiin tiro aad u tiro yar oo ka mid ah shirkadaha dadweynaha sida Shirkadda Kraft Heinz (26.7%), Shirkadda Coca-Cola (9.32%), Bank of America (11.5%), Apple (5.4%) shirkaddu waxay hanti badan ku heshay Maraykanka ugu weyn. Shirkadaha diyaaradaha, oo kala ah United Airlines, American Airlines, si loo magacaabo dhowr laakiin waxay iibiyeen dhammaan hantidii shirkadeeda horaantii 2021.
Berkshire Hathaway waxay leedahay celcelis ahaan kobaca sanadlaha ah ee qiimaha buugga ee 19.0% saamileyda saamileyda ah tan iyo 1965 (marka la barbar dhigo 9.7% S&P 500 oo saami qaybsiga lagu daray isla muddadaa, iyada oo la shaqaaleysiinayo raasamaal aad u badan, iyo deyn aad u yar.
Kaydkeedu wuxuu u qaybsan yahay laba fasal. Fasalka A waxaa lagu furay qiimo dhan $ 318,800.00 halka fasalka B lagu kala iibsanayo qiyaastii $ 211.91.
Si kooban, lahaanshaha Berkshire waxay la mid tahay lahaanshaha maalgashi badan oo kayd ah. Tani waxay gelinaysaa liiska khatarta hoose, kaydka abaal-marinta sare.
#5. Shirkadda Walt Disney
Shirkadda Walt Disney, oo sida badan loo yaqaan Disney waa warbaahin tiro badan oo kala duwan iyo madadaalo madadaalo leh oo xarunteedu tahay dhismaha Walt Disney Studios ee California.
Intaa waxaa u dheer, Disney waxay leedahay khadad aad u ballaaran, Pixar, Marvel, iyo istuudiyaha filimada Lucasfilm, shabakadaha telefishanka ABC iyo ESPN, iyo Hulu, ESPN+, iyo adeegyada qulqulka Disney+.
Jardiinooyinka mawduucoodu waxay leeyihiin awood qiimayn oo aad u fiican marka loo eego cimilada dhaqaalaha badankood. Wareegyada filimada ee Disney waxay ka mid yihiin kuwa ugu qiimaha badan adduunka, ganacsiyadooda qulqulka ayaa soo saara dakhli si xawli ah u koraya.
Sidaan aragnay, Disney kama difaacin masiibada COVID-19. Jardiinooyinka mowduuca ayaa xirnaa bilo waxayna ku shaqeyn doonaan awood yar mustaqbalka la filayo. Khadka dalxiiska ee Disney weli waa xiran yahay, inta badan tiyaatarada filimada sidoo kale waa. Laakiin mustaqbalka fog, astaanta Disney iyo hantida garaadka ee qiimaha leh ayaa ka dhigaya maalgashi badbaado leh.
Shirkadda, oo ka ganacsata sarrifka saamiyada New York (NYSE) sida (NYSE: DIS) waxay ahayd qayb ka mid ah celceliska Warshadaha Dow Jones ilaa 1991. Bishii Ogosto 2021, wax ka yar saddex-meelood laba meelood saamiyada waxaa lahaan jiray dhaqaale weyn. machadyada.
Ilaa wakhtiga boostada, saamiyada shirkadda Disney waxay ku iibsatay USD 126.76 USD -0.080 (0.063%). Caddaynta muujinaysa inay tahay khatar hoose, abaal-marin sare.
Apple Inc. waa shirkad teknolojiyad caalami ah oo xarunteedu tahay Cupertino, California, oo naqshadeysa, horumarisa, oo iibisa elektiroonigga macaamiisha, software kombiyuutar, iyo adeegyo onlayn ah. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah shirkadaha tikniyoolajiyadda Big Tech, oo ay weheliso Amazon, Google, Microsoft, iyo Facebook.
Apple wuxuu u ganacsadaa sidii (NASDAQ: AAPL) wuxuuna leeyahay faa iido waarta oo ah saldhig macmiil oo aad u daacad ah iyo nidaamka deegaanka ee alaabada loogu talagalay inay si fiican ugu wada shaqeeyaan midba midka kale. Si kale haddii loo dhigo, macaamiisha iPhone waxay u muuqdaan inay sii ahaadaan macaamiisha iPhone.
Dadka adeegsada laptops-yada MacBookga waxay u muuqdaan kuwo aad daacad ugu ah sumcadda sidoo kale, iyo joogitaanka-guriga ee masiibada COVID-19 ayaa laga yaabaa inay u noqoto kaabe iibinta MacBookga.
Dakhliga sanadlaha ah ee Apple ee guud ahaan waa $ 265 bilyan sanad maaliyadeedka 2018. Bishii Ogosto 2018, Apple waxay noqotay shirkaddii ugu horreysay ee si guud looga ganacsado Mareykanka oo lagu qiimeeyo in ka badan $ 1 tiriliyan oo kaliya laba sano kadib bishii Ogosto 2021 waxay noqotay shirkaddii ugu horreysay ee $ 2 tirilyan oo Mareykan ah.
Laga bilaabo 19th Oktoobar, saamiyada Apple waxaa lagu kala iibsadaa $ 119.59 USD +0.57 (0.48%). Waxaas oo dhan marka la isku daro waxay muujinayaan in Apple ay heshay awood qiimayn aad u weyn taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah halista ugu hooseysa, kaydka abaalmarinta sare
Shirkadda Starbucks waxay ku baayacmushtari jirtay sidii (NASDAQ: SBUX) waa silsilado caalami ah oo kafeegayaal ah iyo keyd kayd. Iyada oo xarunteedu tahay Washington, waxay noqotay silsiladda kafeega ee ugu weyn adduunka.
Calaamadeeda la aaminay waxay siineysaa awoodda qiimeynta shirkadda kuwa ay xafiiltamaan, cabirkeeda weynna wuxuu siinayaa faa'iidooyin wax ku ool ah sidoo kale. Si kale haddii loo dhigo, Starbucks waxay ku dallaci kartaa lacag dheeraad ah iyada oo isla mar ahaantaana ka faa'iideysanaysa faa'iidooyinka qiimaha ee la socda ahaanshaha shirkad weyn.
Starbucks waxay sii wadaysaa inay kordhiso dakhligeeda sannadka oo dhan- illaa sannadka 2019, dakhliga soo xarooda wuxuu taagan yahay $ 26.50 bilyan. Xitaa markii masiibada COVID-19 ay ku qasabtay Starbucks inay xirto aagagga fadhiga ee gudaha, macaamiisha ayaa wali ku qulqulaya khadadka Starbuck si ay u soo qaataan cabitaannada ay jecel yihiin.
Laga bilaabo maanta, kaydka Starbucks waxaa lagu kala iibsanayaa 89.01 USD +0.49 (0.56%) ee suuqa saamiyada ee New York oo ah mid ka mid ah kuwa ugu khatarta yar, kaydka abaalmarinta.
Sidoo kale tan akhri Waa Maxay Maalgashiga Kobaca Dakhliga? | Tilmaam Buuxa Oo Ku Saabsan Hantida Weyn
# 8. Procter & Gamble
Shirkadda Procter & Gamble (P&G) waa shirkad badeecadaha macaamiisha ah oo caalami ah. Waxay ku takhasustay baaxad ballaaran oo caafimaad shaqsiyeed/caafimaadka macmiilka, alaabtan waxaa loo habeeyay dhowr qaybood oo ay ka mid tahay Quruxdu; U diyaargarowga; Daryeelka caafimaadka; Dharka & Daryeelka Guriga si aad u magacowdo dhowr.
Kahor iibinta Pringles ee Kellogg's, faylalka waxsoosaarka sidoo kale waxaa ku jiray cuntooyin, cunto fudud, iyo cabitaan. Si aan kuu tuso sida joogtada ah ee ganacsiga Procter & Gamble uu muddo u socday, shirkaddu waxay kordhisay saami -qeybsigeeda 63 sano oo xiriir ah. Taasi waa mid ka mid ah taariikhaha saami qaybsiga ugu wanaagsan ee dhammaan suuqyada saamiyada.
Dakhliga la soo saaray sanadka 2020 waa US $ 70.95 bilyan. Procter & Gamble waxaa lagu kala iibsanayaa suuqa saamiyada New York sida (NYSE: PG) 144.36 USD −0.030 (0.021%) taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah halista ugu hooseysa, kaydka abaalmarinta sare.
#9. Sanduuqyada Maaliyadda
Miisaaniyada khasnadda waa biilasha khasnadda, qoraalada, iyo curaarta. Mabaadi'da dammaanad-qaadyadani waxay ku xidhan yihiin in sicir-bararku kor u kaco ama hoos u dhaco. Waxa soo saara Waaxda Maaliyadda ee Maraykanka. Waxaa muhiim ah in la ogaado waxyaabaha soo socda ee ku saabsan maaliyadda khasnadda.
Biilasha khasnadda ayaa bislaada hal sano ama ka hor.
Qoraalladu waxay fidsan yihiin ilaa 10 sano.
Curaarta khasnadda ayaa baaluqda ilaa 30 sano kadib.
Dammaanadaha Khasnadda, waxaad si toos ah u iibsan kartaa ama u iibin kartaa ama maalgelin kartaa wadaagga ah, ama waxaad sugi kartaa ilaa inta ay ka qaan gaadhayso. Ma awoodid inaad jebiso taariikhda qaan-gaadhnimadaada. Haddii aad hayso khasnadda ilaa ay ka qaan gaadhayaan, ma waayi doontid wax lacag ah, ilaa aad iibsato curaarta wax-soo-saarka taban mooyee.
Kharashaadka maalgashiga ee dammaanadda Khasnadda way kala duwanaan kartaa. Waxaad ku bixin kartaa meel kasta laga bilaabo $0 ilaa $5 milyan. Haddii aad doorato inaad maal-gashato adigoo kaashanaya dullaal, waxaa laga yaabaa inaad haysato lacag dullaal-ku caawiyay.
Maalgashigaan ayaa sidoo kale loo yaqaanaa inuu yahay mid ka mid ah maalgashiyada ugu nabdoon, dakhligaagu wuxuu noqon karaa canshuur-dhaaf.
Magdhowgu waa heshiis caymis oo dammaanad qaadaya lacag -bixinno joogto ah oo la siinayo iibsadaha heshiiska. Dakhli go'an waa qaabka ugu fudud ee macaashka. Iyada oo leh gunnooyin go'an, waxaad ku bixinaysaa magdhowga iyo beddelkeeda, waxay ku siinayaan xaddi go'an oo dakhli ah.
Dakhligani caadi ahaan wuxuu yimaadaa bil kasta, in muddo ah oo noqon karta inta aad nooshahay. Haddii aad heleyso foom ballan -qaad la hubo ah, halistaadu way yar tahay. Gunnadaada waxaa taageera shirkadda caymiska ee haysa.
Laga bilaabo badhtamihii Ogosto 2020, dulsaarka dulsaarka sanadlaha ah ee go'an wuxuu u dhexeeyaa qiyaastii 1.0% ilaa 3.60%, marka loo eego Dakhliga Blueprint, oo ah suuq sannadeedka go'an. Maskaxda ku hay, in kastoo, sicirka dulsaarka sare uu badanaa ka yimaado caymisyo aan si fiican loo tixgelin, taasoo la micno ah inay u badan tahay inay bixin waayaan lacag bixinta.
Tusaalooyinka macaashka waxaa ka mid ah qorshayaasha Lambarka Bulshada iyo Hawlgabka.
Talo soo jeedinta saamiyada
Si aad aqoon wanaagsan ugu yeelato saamiyada aadka u wanaagsan, gaar ahaan khatarta hoose, kaydka abaal-marinaha sare leh ee aad iibsan karto, waxaan kugula talinayaa inaad iska diiwaan geliso La-taliyaha saamiyada Motley fool's. In ka badan 25 sano oo waayo-aragnimo maaliyadeed iyo khibrad ah, walaalaha Gardner ayaa ka caawiyay malaayiin Maraykan ah inay gaaraan xorriyad dhaqaale.
La -taliyaha saamigu wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarro saamiyadeed oo kala duwan oo aad ka doorato iyadoo ku saleysan doorbidkaaga.
Si aad iskaga diiwaangeliso La -taliyaha Suuqa, Guji xiriirka hoose.
SAXIIX LA -TALIYAHA STOCK
Waxaa muhiim ah in la ogaado in aysan jirin wax maalgashi ah oo gebi ahaanba aan khatar ahayn. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira halis yar, kayd abaalmarino sare leh oo aad lacagtaada gelin karto.
Eeg liiskayga si aad u ogaato saamiyada ay tahay in la maalgashado.
Sidoo kale Eeg Qoraalladaas
Waa maxay Hantida Guryaha Dijital ah? Sideen lacagtayda ugu maalgelin karaa
10 Siyaabood Oo La Xaqiijiyay Oo Lagu Maareeyo Kharashaadka Aan La Filayn
Dib -u -eegista La -taliyaha La -talinta ee Motley Fool 2022: Ma mudan tahay?
Maalgelinta biilasha khasnadda ee Nigeria waa bilaash. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jirta baahi loo qabo in la barto shaqada…
10 Miisaaniyadeed ee ugu Fiican Sanadka 2021
Miisaaniyaduhu waa saamiyaal aad ugu eg shirkadaha iyo waxqabadka tusmada suuqa, sida…
Siyaabaha ugu Wanaagsan Iyo Faa'iidooyinka Kobcinta Miinada Gudaha
Waxaa jira noocyo badan oo geedo geedo ah oo aad ku beeri kartid gudaha, taas oo reexaanta ka mid ah. Ma rabtaa…
Miisaaniyadaha qeybsiga ayaa ah maaliyado is-dhaafsi ah ama lacago is-weydaarsi (ETFs) oo ka kooban kayd badan oo isku daya inay raad raacaan tusmaynta.…